DHAWAAQU HA GAADHO MEEL DHEER – (W/Q: Cabdiraxmaan Caydiid)
Home QORMOOYIN DHAWAAQU HA GAADHO MEEL DHEER – (W/Q: Cabdiraxmaan Caydiid)
Marka hore Mahad oo dhami Eebe ayay u sugnaatay, Nabadgelyo iyo Naxariisina Suubanaheena Muxammad. Marka xiga waxaan Salaan Diiran hawada u marinayaa bahda Saxaafadda iyo qof kasta oo qoraalkaygani soo gaadho. Markale waxaan halkan uga mahad celinayaa Guddida Abaaraha Qaranka, xukummadda iyo dadweynaha dibad iyo gudaba ka qayb qaadanaya sidii ay u taakulayn lahaayeen dadkooda dhibaataysan.
Walaalayaal war idinkuma seegana Xaaladaha Abaaraha ee ka taagan geyigeena iyo duruufaha qalafsan ee lasoo dersay Xooldhaqatadii, beeralaydii iyo intii ku tiirsanayd. Duruufahaas Abaarahu keenen waxay si xalwli ah imika ugu sii fidayaan dadkii deganaa magaalooinka. Xoolo iyaga hadalkooda daa, dadkii ayaa dhimashiidiisu bilaabmaysaa nafaqo darro darted. Reerha kala hayaamay, caruur iyo hooyooyin iyo waalid kala haajiray haldalkooda daa. Waayeel jabad cidla ah lagaga hayaamay ma tira yara. Inta xagga iyo magaalooyinka usoo barakacayaa iyana lama soo koobi karo. …..Intaasi oo dhami war maaha, waayo waad ka dheregsantiiin war la qabaana xiiso ma leh.
Midda aynu ka hadlaynaa waa Deyrtii xilligeedii oo dhamaaday iyo 4 bilood oo jiilaal ah, oo la wajahaayo. Eesh qiyaasak, Maxaaba dee kasoo hadhi dadka iyo xoolaha maanta xaalkooda wad ogtihiin.
WEJIGA SADDEXAAD EE ABAARTA
Abaartu imika waxay u gudubtay Heerka saddexaad taas oo macnaheedu yahay, in xaaldadda lala tacaalayaa ay dhaaftay heerkii Qarankaasi (ama Dal) keligii wax ka qaban karayay. Waxaa kale oo ay la macno tahay inaanay kugu filnayn inaad baaqyo (Dalab Gargaar) oo ah “Ku: Cidday Khusayso..iwm” oo keliya oo aad soo saarto, amaba wufuud hayadaha deeqaha bixiyaa la kulma, amaba Haya’ado Khayriya oo sadaqaad baxsanaaya waxay soo qaadaan aad ku ekaato. Uma jeedo in aan hawlgalka habkani aanu sax ahayn, waa Muhiim welibana waa in lagusii wadaa, waxaan uga socdaa, heerkani waxa aad kula tacaali kartaa markay xaaladdu maraysso wejiga koowaad iyo labaad, oo aan filayo in ay imaka arrintu ka gudubtay una gudubtay wejiga saddexaad, markaad eegto wararka soo baxaya ee nafaqadaradu ugu horayso. Sidaas darted waa lagu dhawaaqaa, in weji cusub abaartu gashay, gurmadkana wax laga bedelo habkuu u socdo (Scale up)
QAYLADEENII HALKEE BAY GAADHAY BAAD U MALAYANAYSAA?
Ilaa iyo imika. Qayladeenii meel fiican ayay gaadhay. Dadweynihii meel uu joogaba, dibad iyo gudo, Haya’daha Caalmaiga ah ee Gobolka iyo kuwa sadaqaadka baxsada ee dunida Muslimka ayanu u sheegnay duruufaha taagan. Haddana dhinac kale markaad ka eegto, weli qaylo dhaantu waxay ku egtahay innaga gudaheena, ama aan idhaahdo dadka af-Soomaaliga ku hadla. Sababtu waxay tahay dee warbaahinteenu waxay ku hadashaa Af-Soomlai, waxaana dhegaysta inta Af-Soomaaliga fahmaysa. Ilaa heer, way qaataan warbaahino kale oo aan Afsoomaali ku hadal, laakiin way yartahay, waana heer war-ahaaneed uun. Sidaas darted waxaynu odhan karnaa, iyadoo la dadaalayo, haddana weli Dhawaaqu Meel Dheer ma Gaadhin
WAA MAXAY SABATA GURMADKA CAALAMIGA AHI ILAA IMIKA GAABISKA U YAHAY?
Wax kale maaha ee waxa weeye, Adduunyada maanta waxa hoggaamiya Iclaamka (Saxaafadda). Dunidu maanta waxa indhahoodu ku jihaysan yihiin waxa ka dhacaya Syria iyo Ciraaq. Markaa in xaggan iyo Geeska Afrika indhuhu soo eegaan, waxay u baahantahay in Sanqadh Weyn la sameeyo, si aad dareenka dunida u hesho. Taasina waa in aynu dib u yara eegno, ilaa imika sidaynu wax u wadnay, wixii aynu ka baranay iyo dabcan sida wax u shaqeeyaan Dunida manta (Dhinaca Arimaha Bani’aadamnimo iyo dabcan Siyaasiyan ba).
MAANTA MAXAA I-NALA GUDBOON ?
Maanta waxa inala gudboon (waa ka hor intaanay Bisha December dhamaan) in aynu adeegsano ,si toos ah, innagoo innagu majaraha u hayna, War-baahinta Caalamiga ah. Dawladda Somaliland waa in ay degdeg u casuunto Warbaahinta Caalmiga ah ee ay ka mid yihiin Aljazeera, BBC, Al-Arabiya iyo kuwa la midka ah. Tani waxay suura gelinaysaa (Ilaahay Idamkiisa) inay arintu dhaafto Haya’adaha Deeqaha bixiya ee fadhigoodu yahay Nairobi, oo ay u gudubto dawladahooda deeqaha usoo dhiiba, markaas bay iyaguna dhega nuglaanayaan. Ilaa imika ma jirto, hayaa’ad keliya oo Dawladdeedii waydiisatay miisaaniyad ka saa’id ah wixii loogu talagalay inay ku shaqeeyaan sanadka dhamaanaya (2015/2016).
MAXAY KUUGU KACAYSAA INAAD SAXAAFAD CAALAMI AH SOO MARTIQAADO?
Runtii waa kharash doora oo aan yarayn, hase yeeshee waxa uu tarayo ayaa ka badan. Kasoo qaad inay kuugu kacdo ilaa 200 -300kun. Waxay dhalin kartaa, ilaahay idamkii, in ka badan 50 milion oo yabooh ah in la helo. Arinta Xoolaha la xannibay lafteeda, waa loo adeegsan karayaa, oo abaarta iyo xoolo joojijnta oo laysku xidhay ayuu barnaamijku noqonayaa. Keligeen Abaartu maaha, gobolka oo dhan bay ka jirtaa laakiin maanta Somaliland iyo Puntland baa ugu nugul. Arimaha baniiadamnimada in laysu kaashado oo aan la siyaasadaynina meesha ayaya ku jirtaa. Markaa waxaan usoo jeedin lahaa dawladda Somaliald hogaanka ha qabsato, oo qayla dhaan Caalamiga ah ha hogaamiso. Shaqadaas iyo masuuliyaddaas waxa iska leh Wassaaradaha Arimaha Dibadda, Qorshaynta, Warfaafinta iyo NERAD.
Maanta haddan Gabay garaynayo..halkaas baan maanso ka bilaabi lahaa “…Dhawaaqu ha Gaadho Meel Dheer………………” …laakiin … Raggii iyo Dumarkii Ilaahay suugaanta hibada u siiyaya baan u dhafayaa…
ILaahow noo Gargaar
Previous articleAqoon yahan Maxmed Cali Bile Oo Ku Biiray Xisbiga KUMIYE-Daawo
Next articleHalyeyga Ugu Mudan Hogaaminta Dalka Ee Mustaqbalka Qalinkii Xidig Maxamuud Xidig